Xildhibaan Yarow ‘‘Ayaxa faraha badan wuxuu ku wajahan Sh/dhexe, Sh/hoose, Baay iyo Bakool‘‘ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xildhibaan Yarow ‘‘Ayaxa faraha badan wuxuu ku wajahan Sh/dhexe, Sh/hoose, Baay iyo...
Xildhibaan Yarow ‘‘Ayaxa faraha badan wuxuu ku wajahan Sh/dhexe, Sh/hoose, Baay iyo Bakool‘‘
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Ayaxa faraha badan, ee hadba gobol ku habsanaya.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa sheegay in Ayaxa gudaha dalka ku jira laga cabsi qabo inuu ku deggo dhul beereed ku yaala Gobolada Dalka, xilli ay beeraleyda suggayan inay soo gurtaan tacabka beerahooda.
Xilligan ayuu sheegay inay suurtagal tahay in Ayaxa uu cagta mariyo beeraha ku yaala Gobolada Shabellaha Dhexe, Shabellaha Hoose, Baay iyo Bakool, sida uu yiri.
Waxaa uu ku celceliyay in cabsida ugu weyn ee laga qabo Ayaxa uu yahay inuu baabi’iyo dalaga soo go’aya, isagoona yiri “Baqdinta ugu weyn ee laga qabo Ayaxa waa inuu ku habsado dalaga soo go’aya iyo daaqa.”
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa waxa uu Culimada Soomaaliyeed ka codsaday in ay shacabka ku baraarujiyan wixii ay qaban lahaayeen, marka ay jirto xaalad ceynkani oo kala ah.
“Waxaan rabaa dhammaan umadda Soomaaliyeed inaan ugu baaqo, Culima’udiinka Soomaaliyeedna aan ka codsado inay dadka la hadlaan, la duceeyo, Ilaahay la baryo, loo noqdo, dadkana la tusaaleeyo wixii ay qaban lahaayeen marka masaa’iibta noocaan ay jiraan.” Ayuu yiri Xildhibaan Yarow oo la hadlay Warbaahinta.
Bishan December oo Soomaaliya lagu arkay Ayaxii ugu badnaa muddo shan iyo labaatan sano ah ayaa galaaftay dhul beereed ballaaran, oo ku yaala Gobolada Dhexe.
Ayax fara badan oo ku wajahan gobolada baay iyo bakol